Nke a nwere ike ịbụ igwefoto nke asịrị iPhone 7 Pro | Esi m mac
Nke a nwere ike ịbụ igwefoto nke asịrị iPhone 7 Pro
Pedro Rodas kwuru | | Apple, Noticias
N'ime ụbọchị ise anyị niile ga-arapara na kọmputa anyị ma ọ bụ telivishọn anyị na Apple TV na nchapu nke na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị na-eme ka anyị chee na Apple na-akwadebe nke ọma. Amabeghị nke ọma ma ọ bụrụ na ọzọ Isi okwu maka March 21 a ga-ewebata iPhone ọhụrụ n'otu oge dị ka iPad ọhụrụ, Ma na ọ na-arụ ọrụ na ya abụghị onye nzuzo.
A izu ole na ole gara aga, ihe kwesịrị ịbụ na-remodeled unibody ahu nke ọhụrụ iPhone 7 na 7 Plus e leaked ma ọ bụrụ na ha mesịrị na-akpọ ya na. The antennas, nke bụ posterior edoghi na Ọ dịghị onye na-enwe mmasị otú ha si dị na ngwaọrụ ahụ, e belatala ha ma ugbu a, ọ bụ naanị n'ọnụ ọnụ na elu ka ha ga-ebi.
Agbanyeghị, asịrị ahụ na-adịwanye mkpa ga-abụ mbata igwefoto abụọ maka ọgbọ ọzọ iPhone. Ihe a na-agwa na blọọgụ pụrụ iche dị iche iche na mba ahụ bụ na amabeghị nke ọma ma ọ bụrụ na igwefoto ọhụrụ a ga-arịgo na diagonals abụọ nke ihuenyo ahụ, nke bụzi ihe atụ kwesịrị ekwesị na Plus ma bụrụ na ọ nwere ike iru 5.5-anụ ọhịa diagonal, na-eme iPhone 7 Plus nwere ike ịkpọ iPhone 7 Pro ma si otú a dakọtara aha ndị ọhụrụ iPad Pro.
Banyere ọkpụrụkpụ nke ọnụ, anyị nwere ike ịkọwapụta na ọ ga-ebelata ọzọ, na-eguzo na ihe ọ bụla ọzọ na ihe ọ bụla na-erughị 6.1 mm, otu millimita na-erughị nsụgharị 6, nke guzoro na 7.1mm. Nyere nke a, ihe niile na-egosi na ọgbọ ọzọ nke iPhone na-agaghị tufuo ụdi "ọka". Dị ka ị pụrụ ịhụ na ihe O nwere ike ịbụ ezigbo onyonyo ma ọ bụ ezigbo nsụgharị nke echiche ma ọ bụ eziokwu nke igwefoto abụọ anyị na-ekwu maka ya.
Na igwefoto abuo a, ihe a gha acho bu na ekwentị site na ngwanrọ na isi ihe di iche ọ nwere ike ịme otu mmetụta ahụ enwere ike iji ya na telephoto lens na igwefoto mpiaji.
Ugbu a iji gbagoo ụdọ ahụ, ọ bụrụ na ị lelee anya na onyogho anyị na-agbakwunye, ị ga-ahụ ihe nwere ike ịbụ Njikwa Njikwa, wepụtara na iPad Pro, mana na iPhone. Anyị ga-ahụ ihe bụ eziokwu banyere ihe niile anyị kwuru maka ya ma ọ bụrụ na igwefoto ahụ mechara nwee, opekempe f / 1.7, na-adabara Samsung si S7.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Nke a nwere ike ịbụ igwefoto nke asịrị iPhone 7 Pro
Ihe niile anyị maara ruo ugbu a gbasara iPad Ikuku 3
Apple chọrọ okpukpu abụọ izo ya ezo nke iCloud